Shiinaha Heat adkaysi u leh 2 4 6 8 oz oo nacnac ah cunnooyin caag ah oo daboolan dabool alwaax hawo hawo adag leh oo lagu keydiyo weel quraarad leh warshad daboolka bamboo Luhai
Heat adkaysi u leh 2 4 6 8 oz oo nacnac ah cunnooyin caag ah oo la daboolay dabool alwaax hawo adag oo lagu keydiyo weelasha dhalada leh daboolka bamboo
* Xulashada Kaydinta ee Jikada Weyn - Waxay kufiican tahay keydinta cuntada iyo ilaalinta baahida jikada.
* Awood Ballaaran- Si habboon ugu kaydi oo ugu isticmaal bur, sonkor, geedo qallalan, caleemo shaah, dhir udgoon iyo waxyaabo kale oo badan oo ku jira weelka dhalada ah ee ballaaran. Si fudud u beddel dhammaan jawaannada sonkorta ama boorashka ah.
* Yoogurt, Pickles & More-Wanaagsan oo loogu talagalay in lagu cuno khudradda, sameynta caano fadhi, weel cookie ah iyo dhammaan noocyada cuntada DIY.
* Xulasho Caafimaad leh - Si wax ku ool ah oo badbaado leh u keydi dareerahaaga iyo walxaha qalalan. Cunto heer-ammaan ah oo bey'ada u habboon. Mashiinka weelka lagu dhaqo ee aaminka ah iyo kuleylka u adkaysta.
Nooca Khaanadaha Keydka & Khaanadaha
Alaabta Weelka cuntada
Qaab Wareeg / laba jibbaaran
Faahfaahinta sida kor ka muuqata
Muuqaalka Waara, keydsan
Naqshadaynta shaqada Shaqo badan
Dulqaadasho cabbir leh <±1mm
Dulqaadka culeyska <± 1%
wax muraayad, bir bir bir ah
Isticmaalka Baakadaha Cuntada
Astaanta Logo Gaara Oo La Aqbali Karo
Xirmo Xirmo Ammaan ah
Cabir hal xirmo: 10X10X15 cm
Miisaanka guud ee keli ah: 0.190 kg
1.Safty Package kartoonka sanduuqa, bacda xumbo, bacda xumbo sida macaamiisha 'codsi
2. Sanduuqa Midabka Caadiyaysan iyo Kartoonka Waqtiga Lead: Tirada (Cadad)
1 - 2000 15 > 2000
Tayada sare ee lagu tiirsanaan karo iyo dhibcaha dhibcaha weyn ayaa ah mabaadi'deena, taas oo naga caawin doonta booska ugu sareeya. U hoggaansanaanta mabda'a "tayada ugu horreysa, macaamilka ugu sarreeya" ee Super Products Shiinaha Tayada Sare ee Cuntada Fasalka Jar 100ml 180ml 280ml 380ml 500ml Honey Jar Glass loogu talagalay Kaydinta Jar Dhalada leh Bamboo Daboolka, Waxaan sidoo kale hubinnaa in xadkaaga laga yaabo in lagu farsameeyo tayada ugu sareysa iyo kalsoonida. Hubso inaad la kulantid lacag la'aan si aad noolala hadasho wixii macluumaad dheeraad ah. Super Products Shiinaha Swing Top Jar iyo Glass Jar qiimaha, Alaabtayada ayaa si ballaaran loo aqoonsan yahay oo ay ku kalsoon yihiin dadka isticmaala waxayna la kulmi karaan si joogto ah isbeddelada baahiyaha dhaqaale iyo bulsho. Waxaan soo dhaweyneynaa macaamiisha cusub iyo kuwa duugga ah ee ka kala socda qeybaha kala duwan ee bulshada si ay noola soo xiriiraan xiriir ganacsi mustaqbalka iyo guul wadaaga!
Hore: Qaboojiye Isticmaal Jar Spice Jar Jar Glass Cuntada Jar Kaydinta Iyadoo daboolka Wood 3oz 5oz
1oz 2oz 4oz alwaax u adkaysta alwaaxa dhalada dhalada ah ee adag
Jarida Hawada leh Qufulka Khatimidda
Clip Dhalada Kaydinta Muraayadda Top
Dhalooyinka Kaydinta Cuntada
Jar Glass Kaydinta Iyadoo dabool haysa
Dhalooyinka Kaydinta Muraayadda oo Dahaadh Dahab ah leh
dhalada lagu keydiyo kartaa galaas kafeega canis sonkorta ...
Eco saaxiibtinimo dhululubada Clear Glass Jar Iyadoo Roun ...
Dhalooyinka Glass Kaydinta wareega wareega Iyadoo Lock Cl ...
Set of 4pcs Jar Kaydinta leh Decal, Hermetic G ...
Daad 15 oz jumlada caadadii jumlada dhalada caado muon mu ...